मेरो संसार My World: प्रणय दिवस
मेरो संसार My World
साहित्यमा रूची राख्ने एक साहित्य अनुरागी
सर्वाधिकार @ भगवती वस्नेत समय 1:39 PM
प्रणय दिवस :
दैहिक प्रेम या आत्मिक प्रेम
आफैभित्र भएको कस्तुरीलाई नचिनेर मृग भौतारिए झैँ हामी आफैँभित्र भएको प्रेम अनुभूत गर्न नसकेर अनेकतिर भौतारिन्छौ । प्रेम त प्रकृतिमा छ, प्रेम हाम्रै वरिपरी छ अनि प्रेम जता हिंड्यो त्यतात्यतै छ ।
माटोमा, फूलमा, जूनमा, रुख बिरुवामा जतासुकै पनि प्रेमै प्रेम छ । वास्तवमा प्रेमले हेर्दा, खोज्दा र अनुभूत गर्दा सबै वस्तुमा प्रेम भेटिन्छ, हरेक अनुहारमा प्रेम भेटिन्छ र हरेक मुस्कानमा प्रेम भेटिन्छ ।
प्रेम अथाह हुन्छ, यो न दिएर सकिन्छ न लिएर सकिन्छ । धन कमाउने मान्छे कैलेकहिँ धनको गरिव बन्न सक्ला तर प्रेम दिने मान्छे कहिले पनि प्रेमको गरिब भएको सुनिएको छैन र देखिएको पनि छैन । प्रेमले गरिबको छाप्रोलाई पनि स्वर्ण महल बनाई दिन्छ ।
प्रेमबाट प्रभावित नभएको मानव हृदय यो धरतीमा सायदै होला । प्रेम अनन्त: अमर अनि अज्ञात पनि छ । हृदयले गर्ने हार्दिक प्रेमको किस्सा जति सुनाए पनि पुरानो हुँदैन । परिवेश र आवरणहरू मात्र नयाँ र पुराना हुने हुन् । मानव हृदयको प्रेम हिजो पनि नयाँ थियो, आज पनि नयाँ नै छ अनि भोलि पनि नयाँ नै हुनेछ।
प्रेम र मानवताका पुजारी भ्यालेनटाइनले प्रेमको निम्ति मुत्युवरण गरेको दिनको सम्झनामा इटालीको राजधानी रोमबाट भ्यालेन्टाइन डे मनाउन सुरूवात भएको हो । पश्चिमी मुलुकबाट सुरूवात भएको यस दिवस नेपालमा पनि संस्कृतिको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ ।
पश्चिमेली समाजमा परिवार विघटनको बढ्दो क्रमसँगै विवाहप्रति मान्छेको आकर्षण घट्दो छ । यौनलाई सामाजिक मर्यादाको विषयभन्दा विशुद्ध प्राकृतिक आवश्यकताको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गरेको देखिन्छ ।
इजरायलीहरु यौनलाई दैनिक रुपमा खाने भोजनको संज्ञा दिन्छन् । वर्षौसम्म यहाँ एक्लै बसेर काम गरेका कामदारलाई त्यस्तो जिन्दगी पनि के जिन्दगी भनेर व्यंग्य गर्ने गर्छन् । यहाँका युवा युवतीहरु १२ बर्ष पुगेपछि बर्मिच्वा गर्छन् । यसपछि उनीहरु वयष्क भएको मानिन्छ । यदि १२ वर्ष हुँदा पनि केटा-केटी एक अर्काप्रति आकर्षित भएनन् भने ती केटा केटीहरुमा केही खराबी छ भन्ने ठानेर डाक्टरलाई जाँच गराउँछन् ।
यसरी हेर्दा पश्चिमेली समाजमा पहिला यौन त्यसपछि मात्र प्रेम र विवाह गर्ने संस्कार देखिन्छ । हाम्रो समाजमा भने सबभन्दा पहिला विवाह अनि मात्र प्रेम र यौन भन्ने देखिन्छ । तर मलाई लाग्छ व्यवहारिक र वैज्ञानिक कुरा चाहिँ पहिले प्रेम त्यसपछि मात्र यौन र विवाह हो ।
प्रेम त यौन र विवाहबिना पनि एकल अस्तित्वमा रहन सक्छ । यौन प्राकृतिक आवश्यकता हो भने विवाह सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता हो ।
विशेष गरेर युवा युवतीहरूबीच लोकप्रिय प्रणय दिवसमा विकृति पनि बढ्दो छ । विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण शाश्वत प्राकृतिक नियम हो तर यो प्रेम होइन । निश्चित उमेरसँगै सुरूवात हुने यस्तो आकर्षण सृष्टिको निरन्तरताको निम्ति प्रकृति रहेसम्म रहिरहने छ । प्रकृतिका हरेक प्राणीहरूमा यो नियम चलिरहेको छ र अनन्त सम्म चलिरहने छ ।
मान्छेभित्र विपरीत लिङ्गप्रतिको प्राकृतिक आकर्षणसँगसँगै विशिष्ट प्रेमभाव पनि हुने गर्छ, त्यसैले नै उ चेतनशील मानिन्छ ।
बाहिरी रूपसज्जा र आकर्षक शारीरिक बनावट त आँखाका लागि हुन् तर वास्तविक प्रेम आँखाबाट ओर्लेर हृदयसम्म आइपुग्छ । मनले देखेको प्रेम आँखाले देखेको जस्तो क्षणभङ्गुर र विनासशील हुँदैन । वास्तविक प्रेम त मान्छेले आफ्नो बोली, व्यवहार, विचार आदिका माध्यमले अनुभूत गर्ने विषय हो । प्रेम मनका सारा अँध्याराहरूलाई नास गरी आन्तरिक आनन्दको उज्यालो सिर्जना गर्ने जून हो ।
प्रेम सुन्दरताको पर्याय हो । सुन्दर वस्तुको सम्पर्कले कुरूपहरूमा पनि आशाको सञ्चार हुन्छ । त्यसकारण प्रेम सुन्दरताको शाश्वत रूप हो ।
धर्तीको विशालता र व्यापकता प्रेमका विशेषता हुन् । जसरी लाखौं मानिसले थुक्दा, कुल्चँदा र अपमानित तुल्याउँदा पनि धर्ती चुपचाप शान्त र स्थिर रहन्छ । प्रेमलाई जीवनमा उतारेका मानिसहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् । जहाँ लिन होइन दिन खोजिन्छ, त्यहाँ सदैव शान्ति र स्थिरता कायम हुन्छ ।
प्रेममा सबै सम्मानित हुन पाउँछन् । प्रेमको संसारमा कोही ठूलो र कोही सानोको असमानता रहँदैन । त्यसैले प्रेमको स्वभाव भएका मानिसको संसार हार्दिकतापूर्वक सुखमय हुन्छ । जसरी सूर्यको प्रकाश झारपात र वृक्षहरूमा एकै ढङ्गले छरिन्छ, साँचो प्रेम पनि सबैमा सबैतिर एकनाशले विस्तारित हुन्छ ।
आज सन्त भ्यालेन्टाइनको स्मरण: प्रेमदिवस मनाइरहँदा त्यसको सार्वभौम अस्तित्वलाई पनि स्मरण: गरौं । शरीर, सम्पत्ति र वासनाको सीमाभन्दा माथि उठेर सबैलाई निष्काम प्रेम गरौं । यदि यसो गर्न सकियो भने हामीले प्रेमदिवस मनाई रहँदा प्रेमको याचना गर्दै बेखबर रोइरहेका आँखाहरूमा आशाको नवीन सूर्योदय हुनसक्छ । यतिखेर हामी जुन व्यक्तिको सम्झनामा प्रेमदिवस मनाइरहेका छौं, उनी अर्थात् सन्त भ्यालेन्टाइन त्यागका विशिष्ट प्रतिमूर्ति थिए । आफ्नी प्रेमिकाका लागि जीवन त्याग्नसम्मको चुनौती सहर्ष स्वीकार गर्न भ्यालेन्टाइन तत्पर रहे ।
प्रेम त अथाह अलौकिक र अनन्त: हुन्छ । प्रेम नै धर्म हो, शक्ति हो अनि शान्ति हो । मानवप्रेम हरेक बन्धन र स्वार्थभन्दा विशिष्ट हुन्छ, माथि हुन्छ र मुक्त हुन्छ । मानवप्रेम सीमाहीन हुन्छ, आकाश जस्तै फराकिलो हुन्छ । प्रेमको कुनै परिधि हुँदैन । यस्तो प्रेमभाव महिला पुरुष सबैमा ब्याप्त हुन्छ तर प्राप्ति भने अपवादले मात्रै गर्न सक्दछ । यस्तो प्रेमको आस्वादन लोभ, मोह, स्वार्थबाट मुक्त मान्छेले मात्रै गर्न सक्दछ ।
प्राय: जसो मानिसले सोच्दछन्, लोग्ने - स्वास्नीबीचको प्रेम नै अन्तिम र अमर प्रेम हो । त्यसैले मान्छेहरू विवाह बन्धनमा बाँधिन आतुर हुन्छन् । पक्कै पनि लोग्ने -स्वास्नीमा प्रेम त हुन्छ; तर बन्धन र स्वार्थभन्दा माथिको प्रेम लोग्ने -स्वास्नीमा पनि अपवादमा मात्रै हुने गर्दछ । लोग्ने र स्वास्नीको प्रेम कतै सम्झौतामा गएर टुंगिन्छ त कतै निजी स्वार्थ र सामाजिक बन्धनमा गएर प्रेमको अन्त्य हुने गर्दछ ।
श्रीमान् र श्रीमतीहरू आजभोलि सम्बन्ध विच्छेद गरी स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न उद्दत देखिन्छन् । जीवन रहेसम्म मान्छे एक्लै बाँच्न सक्दैन । उसलाई कहीँ, न कहिँ एक अर्काको साथ सहयोगको आवश्यकता पर्छ । जीवनभर साथ र सहयोग चाहिने पति र पत्नीहरू पनि आफ्नो भएको सम्बन्धलाई बिगारेर एक्लै बाँच्ने निर्णय गर्न गर्नुको पछाडिको कारण निश्चय नै आपसी प्रेमको अभाव हो ।
आज हामीकहाँ प्रेमको सतही नाटक मञ्चन गर्नेहरूको भीड जताततै देखिन्छ । शरीर सुन्दर भएका र चिटिक्क परेर सजिएका मान्छेहरू प्रेमका लायक हुन्छन् भन्नेहरूको पनि कमि देखिदैन । कुनै दिन जब शारीरिक सुन्दरता स्खलित हुँदै जान्छ अनि प्रेम पनि स्खलित हुँदै जान्छ । त्यो कस्तो प्रेम हो, जुन ओइलाउँदो शारीरिक सुन्दरता र चाउरी परेको छालासँगै ओइलाउँदै र हराउँदै जाने ! अनि ती कस्ता प्रेमी हुन्, जो बेलाबेलामा प्रेमकै नाममा पात्र परिवर्तत गर्दै भौतारीरहने !
आज हामी जुन ‘प्रेम’को कुरा गर्छौं; त्यो शरीरमै समाप्त भएर गएको छ । आज हामीकहाँ प्रेमविवाह गर्नेहरू अधिकांश सम्बन्ध विच्छेद गरेर बस्ने देखिएका छन् । प्रेमको बहानामा विवाहित बनेकाहरू पनि पश्चातापपूर्ण जीवन बाँचेका थुप्रै भेटिन्छन् । योभन्दा ठूलो ‘प्रेम’को अपमान अर्को के हुन सक्छ ?
प्रेम कहिल्यै पनि समाप्त भएर जाँदैन । हाम्रो शरीर, रूप, आकृति, हाड, छाला, सम्पत्ति सबै सांसारिक वस्तु हुन् । यी बदलिन्छन् बारम्बार र अन्ततः समाप्त भएर जान्छन् । तर प्रेम यी सबै वस्तुभन्दा पर हुन्छ । वस्तुहरूको अभावमा पनि प्रेम बाँचिरहन्छ । त्यसैले प्रेमलाई अलौकिक मानिएको हो ।
प्रेमदिवसका सन्दर्भमा व्यक्त गरिने प्रेमका भावनाहरू पनि सतही हुन थाले । प्रेमको मूल्य र अस्तित्व फगत् यौनसुखमा बदलिएर गयो । यसको व्यापकतालाई अत्यन्तै सङ्कीर्ण र कमजोर बनाउँदै लगिएको छ । मानवप्रेम निजी स्वार्थ र सामाजिक बन्धनबाट सदैव माथि रहन्छ । मानवप्रेममा कहिल्यै सम्झौता र स्वार्थ हुँदैन; हुन्छ त केवल त्याग र समर्पण ! मानव प्रेममा बन्धन नभएर, स्वतन्त्रता हुन्छ । प्राप्ति नभएर त्याग हुने गर्छ । मृत्यु नभएर मुक्ति हुन्छ । स्वार्थ नभएर, समर्पण हुन्छ ।
प्रणय दिवस । प्रेमिल मनहरुको उत्सव हो । प्रेम आफैमा प्रेमिल छ । प्रेमिल मनहरुले अझ सुगन्ध थप्दैछन् । प्रेम सबैका लागि सबै प्रेमका लागि हुन्छ ।
आँखाको आकर्षण केही समयपछि सकिएला तर चोखो मायामा एकले अर्कोप्रति समर्पण गरेको अनुभूति युगौयुग अमर भर्इ बाँचिरहन्छ । संसारका सबै प्राणीहरु बिचमा मायाको शीतल आँचल लहराई रहनुपर्छ ।
प्रेम बाँडेर त हेरौ; यो अझै बढ्ने छ । यसलाई फैलाउ अझै फैलने छ । प्रेम एक त्यस्तो चिज हो जुन फैलाउँदा अझ फैलिरहन्छ । प्रेम बाँढेर प्रेमिल जीवन बाँचौ । हेप्पी भेलन्टाइन डे !
✓ © भगवती बस्नेत
आफ्नो अमूल्य राय,सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ छाडिदिनुहोला...▼
Please leave your Comments here...▼
भगवती बस्नेत View my complete profile
गजल कविता गीत मुक्तक विचार शुभकामना साहित्य भावना समाचार लघुकथा हाइकु/ सेन्यु कथा संस्मरण
फेसबुकमा फलो गर्न
तरुनी खेती- सरूभक्त
शिरिषको फूल- पारिजात
पल्पसा क्याफे- नारायण वाग्ले
जीवनका केही पलहरु
Nepali News Sites
नेपाल समाचार पत्र दैनिक
नयाँ पत्रिका दैनिक
गोरखा पत्र अनलाइन
रेडियो स्टेशन छान्नुहोस: छानी-छानि सुन्नुहोस्कान्तिपुरसगरमाथानेपालहिट्सउज्यालो मैत्रीरेडियो अडियोTimes 90.6बिबिसी दैनिक सेवा
यो हप्ताको बुलबुल सुन्नुहोस
Copyright 2011(मेरो संसार) Mylovelysansar All rights reserved. Powered by Blogger.